Ogaden News Agency (ONA) – Xoghayaha Guud Ee JWXO oo Baliga Marsin Booqday.
Xoghayaha Guud Ee JWXO oo Baliga Marsin Booqday.
Posted by Wariye Qaran	/ October 29, 2019
Xoghayaha Guud ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) Dr. Cabdiraxmaan Sh Mahdi (Maadey) ayaa booqosho kutagay Baliga caanka ah ee Marsin, kaas oo xiligan xaadirka ah ay raxmadii Allaah buuxisay.
Xoghayaha ayaa indho indhayn kadib maamulka Somali State, gaar ahaan kuwa Dagmada Marsin ugu baaqay in ay bulshada uga faa’iideeyaan Khayraadka uu Allaah dhulkeena kumanaystay, gaar ahaan Baliga Marsin oo hadii lahagaajiyo bulshada Dagmada kunool anfici lahaa.
Xoghayaha ayaa tilmaamay in Haraha waawayn ee dhulkan uu Allaah kumanaystay ay mudan yihiin in shacabka looga faa’iideeyo, wuxuuna Xoghayuhu sheegay in ay khalad tahay in shacabku uu ku oomo dhul ay Haro waawayn kuyaalaan.
Sidoo kale Xoghayaha ayaa dadka Deegaanka ugu baaqay in ay amaanka ilaashadaan Isla markaana samaystaan iskaashi si ay uga faa’iidaystaan Khayraadka ay biyuhu kamidka yihiin.